Rikoooo.com - Mmanụ oriri 737 Max 8
Fuel oriri 737 Max 8
Jikọtara: 18 Ọgọst 2019, 23:24
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by agbacenza » 05 Eprel 2020, 07:43
Ezigbo ọrụ nke Rikoooo maka v1.03 Boeing 737 Max 8, mana mgbe ọtụtụ ụgbọ elu, oriri mmanụ ala dị ala ma dị anya site na ọnụọgụ ọnụ ọgụgụ.
Ka ọ dị ugbu a, ana m enweta nkezi dị ka 6.020 pound / Hr na ọkwa nke ụgbọ mmiri (FL370 @ 0,79M). Onweela onye mepụtara ihe g’eme?
Na ụdị ndị ọzọ, agbanweela m mgbanwe na ndị mgbanwe:
Ihe Emuma Ahia
Mana echeghị m ime mgbanwe ọ bụla maka ezigbo ọrụ nke otu Rikoooo, na-etinye ndụ n'ihe ize ndụ ma ọ bụrụ na ị ga-enweta ụfọdụ njehie CRC, na-eme ka ihe nlereanya ahụ gharazie ịrụ ọrụ ọzọ.
Ndụmọdụ ọ bụla ga-enwe ekele, ekele
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by PAUL1984 » 13 Eprel 2020, 02:09
Gbalịa dochie akụkụ ndị dị na Aircraft.cfg gị (dịka ọmụmaatụ C: Mmemme MmemmeMicrosoft GamesMicrosoft Flight Simulator XSimObjectsAirplanesBoeing 737-MAX8 Multi-Livery)
ya na akuku ndia O buru na ha di iche.
Ngini.1 = -48.88, 16.66, 0
oil_flow_scalar = 0.667 // ORIG .785
mmanụ ala_flow_gain = 0.004
zoro_N2_rpm = 15000
afterburner_a dị = 0
reverser_a dị = 1
Enwere m olileanya na enyerela m aka.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by agbacenza » 13 Eprel 2020, 13:29
Usoro gị dị mma, bụ otu ihe ị nwere ike ịchọta na ụgbọelu mbụ.cfg. Couplebọchị ole na ole gara aga, emeela m onwe m ntakịrị mod na faịlụ ahụ naanị iji chọpụta, yana m na-enyo enyo, enwere nchekwa nchekwa (CRC ma ọ bụ ihe dịka) site n'aka onye edemede iji gbanwee ihe ọ bụla. Naanị m gbanwere "oil_flow_scalar" ka ọ bụrụ uru m ghọtara n'onwe m, mana ngwugwu agaghị ebu ya FSX bido. Ya mere etinyeghachiri m faịlụ mbụ inwere ngwugwu ọzọ.
Ọnọdụ bụ na ụkpụrụ ndị dị ugbu a na-enye oke mmanụ ọkụ dị ala (ị nwere ike iji 100% na-egbochi mmanụ gburugburu ụwa), ọ masịrị m nke ukwuu "ofufe" na-atụle ihe ndekọ mmanụ / oge. Dị mma nke ukwuu ọrụ si Rikoooo, dị nnọọ ụfọdụ mgbanwe dị mkpa iji nwee ihe fọrọ nke nta zuru okè ọrụ. Olileanya na ndị edemede ga-eme ya oge ụfọdụ ma ọ bụ ma eleghị anya, ka anyị (ndị ọrụ) mezuo mgbanwe iji nweta ezigbo ụkpụrụ.
Daalụ maka aro gị !!
Jikọtara: 18 Sept 2010, 08:28
Kacha eji simulator: FS2004
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by mmpoo451 » 14 Eprel 2020, 14:26
Gbalia igbanwe ugbo elu.cfg na ikike ikike.
Ọ bụụrụ m ọrụ. M gbanwere scalar scalar na 1,68 ma ugbu a ọ bụ ihe ga-ekwe omume.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by agbacenza » 14 Eprel 2020, 22:20
Gbalịrị, arụghị ọrụ, ngwugwu niile agafeela. FSX o dighi ngwugwu a.
Daalụ maka repply ...
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by PAUL1984 » 15 Eprel 2020, 01:26
Ọrụ m rụrụ ọrụ nke ọma
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by agbacenza » 15 Eprel 2020, 06:57
Usedzọ ejiri Ctrl + SHIFT + ENTER dezie ka onye nchịkwa ma rụọ ọrụ. Iji usoro ndị ọzọ arụ ọrụ.
M ga-eji ụgbọ elu ole na ole jiri gas_flow_scalar = 1.68 mee ihe m ga-akọ na nsonaazụ ya.
Daalụ ọzọ !!
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by agbacenza » 24 Eprel 2020, 18:29
Emere ụfọdụ ọnwụnwa na iji oil_flow_scalar = 1.68 wee pụta nsonaazụ (lelee foto ndị metụtara):
Iri tagzi: 1.788 p
Ikike ikuku: 17.098 p / Hr (nke ọkọlọtọ 13.750 p / Hr)
Oriri nke irighiri mmiri: 4.953 p / Hr (nke ọkọlọtọ 5.720 p / Hr)
Ike oriri: 3.154 p / Hr (vs ọkọlọtọ 3.295 p / Hr)
Mmanụ njem Trip: 36.168 p (vs 39.732 p ezubere)
Mkpokọta Cons: 38.181 p
N'aka nke ozo, LittleNavMap weputara ihe a:
Ikike ikuku: 15.837 p / Hr
Ibe mmiri: 4.980 p / Hr
Iri nri: 3.131 p / Hr
Mkpokọta oriri: 38.179 p
Igwọ oriri taksi na ịrị elu dị elu, ọnụego ụgbọ oriri na Cruise na Osimiri dị ntakịrị ala. Lelee ụkpụrụ N1, N2 & FF na njem ụgbọ mmiri (459 kts @ FL360). Ọ dịghị mfe itinye ụgbọ elu iji mee ya n'ụzọ ziri ezi. Mana m ga-aga n'ihu, n'ezie, achọrọ m ọtụtụ ihe ọmụma gbasara ụdị mgbakọ na mwepụ maka oriri yana mmekọrịta ya na ọdụ ụgbọ elu.
Agụrụ m enyemaka MS na -> https://docs.microsoft.com/en-us/previo ... dfrom=MSDN
mana enwere m mgbagwoju anya, aga m aga n'ihu na ...
Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ụfọdụ ozi ndị ọzọ gbasara ịme ihe ngosi ka a ga-enwe ekele.
Mgbakwunye AA 884 - SVMI ka KPHX - 1 nke 3.jpg adịghịzi
Mgbakwunye AA 884 - SVMI ka KPHX - 2 nke 3.gif adịghịzi
Mgbakwunye AA 884 - SVMI ka KPHX - 3 nke 3.gif adịghịzi
AA884-SVMItoKPHX-3of3.gif (42.56 KiB) Elere 720 ugboro
AA884-SVMItoKPHX-2of3.gif (62.54 KiB) Elere 720 ugboro
AA884-SVMItoKPHX-1of3_2020-04-24.jpg (52.29 KiB) Elere 720 ugboro
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by amberdog1 » 26 Eprel 2020, 19:55
M meghere faịlụ .cfg dị ka faịlụ ederede, mee mgbanwe ndị ahụ wee chekwaa ya dịka cfg, mepụta ndabere nke faịlụ mbụ wee mee otu na mado nke ọhụrụ. Ọ na-arụ ọrụ, ma ugbu a ụgbọelu m nwetakwa ikike nrụpụta mmanụ ọkụ karịa. Echetụbeghị m ịgbanwe cfg na ya.
Daalụ maka ikenye eri a.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by agbacenza » 27 Eprel 2020, 17:44
Ndewo, ee amberdog1
Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, PAUL1984 zigara uru nke 1,68; na "ikpeazụ" oriri dị nso na ọkọlọtọ.
Cannwere ike ịnwale ọnụahịa ndị ọzọ, yana agụnyere digits 3 (1,678 ma ọ bụ 1,682), ị ga-enweta ezigbo nsonaazụ dabere na usoro ụgbọ elu.
Naanị ihe dị na ya bụ na ọrịrị ịrị elu nke ukwuu, na Cruise na Descent oriri bụ "obere" dị ala.
M ka na-achọ ezigbo “mmekọrita / nha”, mana achọrọ ya karịa gbasara ihe ndị ọzọ gbasara .cfg maka Engine na Thrust na mmekọrịta ya n’etiti ha. Ọ bụrụ na ọ mere na ịchọta ozi biko biputere anyị ebe a !!